Holm pfungwa bhokisi | Holmbygden.se
Une pfungwa yakanaka – huru neduku?
Kungava chinhu unofunga aigona kupa kupfuura yainakidza Holm Countryside kana zvimwe vakachenjera. Chete zvokufungidzira nemiganhu…
Pamwe chete, tiri pfungwa nyore zvikuru zvakanaka. The pfungwa inopiwa pano anogona semuenzaniso. kushandiswa sezvo hwaro misangano siyana pamusoro ebudiriro Holms – kana iwe unogona kubatanidzwa. Zvingavawo vakadaro kuti HBU zvigadzirise kana kujaira kana baba namai kurudyi. Usazengurira nesu chero, No zvakataurwa iri benzi!
How I kuitawo pfungwa dzangu?
Nyore nzira ndeyokushandisa chimiro chedu kurudyi. Zadza mumabhokisi mutume, pachena! Ungaverenga batanidza chimwe faira, gwaro kana mufananidzo wako panyaya, Zvakanakawo.
Zvinogonekawo kuti isu paemail kana zvinonyatsoenderana nani: info@holmbygden.se.
Unoda kuramba kusazivikanwa?
Zviri Ichokwadi chinodiwa kana uchida utiudze ani uri, asi rinogonawo vanoramba vasingazivikanwi.
Vill du kanske bara vara kontaktbar för Holmbygden.se (#ShepherdsHut), asi kusazivikanwa chokunze chete pfungwa dzenyu Zvakanakawo. Kana zvakadaro, nyora pasi apa “Personal Communication”. Tumira pfungwa yako kubudikidza Website.
mazano All unobvumirwa.
Title pfungwa dzenyu:*
Personal shoko webmaster:
Batanidza ikwidzwe pazasi:
Akatsigira faira zvinogona:
Maximum faira saizi: 25MB.
mu 2 (kushandisa chimiro kakawanda kana zvakakodzera):
Previous nhau kuti NEWS Widget Select Month Ndira 2019 (1) Zvita 2018 (1) Gumiguru 2018 (1) Gunyana 2018 (4) Nyamavhuvhu 2018 (1) Chikunguru 2018 (5) Chikumi 2018 (6) Chivabvu 2018 (6) Kubvumbi 2018 (2) Kurume 2018 (2) Zvita 2017 (2) Chikunguru 2017 (2) Chikumi 2017 (1) Chivabvu 2017 (4) Kubvumbi 2017 (2) Kurume 2017 (4) Kukadzi 2017 (4) Ndira 2017 (1) Zvita 2016 (2) Mbudzi 2016 (1) Gunyana 2016 (4) Chikumi 2016 (5) Chivabvu 2016 (5) Kubvumbi 2016 (3) Kurume 2016 (6) Kukadzi 2016 (4) Ndira 2016 (2) Zvita 2015 (3) Mbudzi 2015 (4) Gumiguru 2015 (1) Gunyana 2015 (5) Nyamavhuvhu 2015 (4) Chikunguru 2015 (4) Chikumi 2015 (3) Chivabvu 2015 (7) Kubvumbi 2015 (4) Kurume 2015 (4) Kukadzi 2015 (4) Ndira 2015 (8) Zvita 2014 (3) Mbudzi 2014 (4) Gumiguru 2014 (5) Gunyana 2014 (3) Nyamavhuvhu 2014 (4) Chikunguru 2014 (2) Chikumi 2014 (6) Chivabvu 2014 (5) Kubvumbi 2014 (8) Kurume 2014 (11) Kukadzi 2014 (4) Ndira 2014 (7) Zvita 2013 (12) Mbudzi 2013 (12) Gumiguru 2013 (10) Gunyana 2013 (9) Nyamavhuvhu 2013 (15) Chikunguru 2013 (13) Chikumi 2013 (18) Chivabvu 2013 (17) Kubvumbi 2013 (13) Kurume 2013 (11) Kukadzi 2013 (7) Ndira 2013 (13) Zvita 2012 (9) Mbudzi 2012 (9) Gumiguru 2012 (6) Gunyana 2012 (10) Nyamavhuvhu 2012 (10) Chikunguru 2012 (4) Chikumi 2012 (11) Chivabvu 2012 (10) Kubvumbi 2012 (4) Kurume 2012 (7) Kukadzi 2012 (6) Ndira 2012 (3) Zvita 2011 (3)
17/1: Utah: yambiro kirasi 1, rakanaya chando, V ... Rakanaya chando kumaodzanyemba mberi ... verenga zvakawanda
24/5: Summer kuratidzwa I .. C.